Kenniinsi sagalee murtee ummata Sidaamaa karaa nagaan akka xummuramuuf qophiin barbaachisu godhame – Fana Broadcasting Corporate
Kenniinsi sagalee murtee ummata Sidaamaa karaa nagaan akka xummuramuuf qophiin barbaachisu godhame
Finfinnee, Sadaasa 9, 2012 (FBC) – Kenniinsi sagalee murtee naannoo uummata Sidaamaa karaa nagaan akka xummuramuuf qophii barbaachisu godhuu Godinni Sidaamaa beeksise.
Adeemsi kenninsa sagalee murtoo ummata sidaamaa guyyaa boruu ni gaggeeffama.
Murtoo ummataa gaggeessuuf qophiin barbaachisu hundi xummuramu bulchaan bulchiinsa godina Sidaamaa obbo Dasitaa Leedaamoon ibsaniiru.
Magaala Hawaasaa dabalatee naannoo Godinichaa hunda keessatti filannoo nagaa taasisuuf hawaasa waliin mariin godhamuu fi raawwii kana keessatti sodaan rakkoo nageenyaa tokkollee hin jiraatu jedhaniiru.
Qaamooleen nageenyaa Raayyaan Ittisa biyaa,poolisiin feederaalaa,humni addaa fi poolisiin naannichaa waliin ta’uun filannichi karaa nagaan akka xummuramuuf qophii ta’aniiru jedhan obbo Dasitaan.
Obbo Dasitaan Filattoonni kaardii filannoo fudhatan boru barii sa’aatii 12:00 eegalanii gara buufata filannoo deemuun sagalee akka kennan waamicha dhiyyeessaniiru.
Filannichi demookiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta’u bulchiinsi godinichaa amantaa olaanaa qaba jedhan.
Galmeen filattootaa akkuma karaa nagaan xummurame filannoon kun karaa nagaan akka xummuramu soda tokko malee bilisan sagaleen kennamu akka qabu dhaamaniiru.
Godinichatti itti gaafatamaan Qajeelcha Bulchiinsaa fi Nageenyaa obbo Alamaayyoow Xiimootiwoosis gama isaaniin guyyaa kana dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen daldalaa tajaajila kan hin kennine ta’uu ibsaniiru.
Sagalee kennitoonni soda tokko malee mirga isaanii fayyadamuu akka qaban dhaamaniiru.
Guyyaa boruu sa’aatii 12:00 irraa eegalee hanga Jimaata ganamaatti tajaajilli geejjibaa magaala Hawaasa keessa kan hin jirre ta’uus ibsaniiru.